श्वेताको दोस्रो विवाहको खर्च विवरण भयो सार्वजनिक, थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ ! - Supportive Nepal
श्वेताको दोस्रो विवाहको खर्च विवरण भयो सार्वजनिक, थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ !
January 10, 2021 January 10, 2021 News NepalLeaveaComment on श्वेताको दोस्रो विवाहको खर्च विवरण भयो सार्वजनिक, थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ !
फिल्म कहाँ भेटिएलाबाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गरेकी नायिका श्वेता खड्काले करोडपति ब्यबसायीका छोरा विजयेन्द्रसँग धुमधामले विबाह गरिन् । सिन्धुपाल्चोकमा माझीबस्ती निर्मण गरिसकेी श्वेताले विजयेन्द्रसँग धुमधामसँग नेपालको सबैभन्दा महंगो ५ तारे होटल गोकर्ण रिर्सोटमा धुमधामले गरिन् ।
श्वेताले करोडौँ खर्च गरेर गरिन् । श्वेता र विजयेन्द्रको विबाह १ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको बताइन्छ । ३ दिनसम्म चलेको विबाह नेपाली चलचित्र उद्योगकै सर्वाधिक महंगो बिहे भएको बताइन्छ । जुन विबाहलाई अहिलेसम्मको भव्य विबाह भएको समेत बताइन्छ ।
धुमधामले विबाह सकिए लगत्तै श्वेता पनि विजयेन्द्रका साथ परिवारका सबै सदस्यहरुसँग अन्तरवार्तामा देखिएकी छिन् । एक युट्युवसँगको कुराकानीका क्रममा श्वेतालाई उनकी सासुले श्वेतालाई बुहारीको रुपमा नभई छोरीको रुपमा स्विकारेको बताएकी छिन् ।
श्वेताकी सासुले श्वेता आफ्नो कान्छो छोराको पेमिकाका रुपमा घरमा आएका कारण श्वता बुहारीका रुपमा भित्रिए पनि आफ्नो छोरी नभएका कारण पनि श्वेतालाई छोरीकै ब्यबहार गर्ने उनले बताइन् ।
सो अवसरमा श्वेताका ससु्राले श्वतेतालाई बुहारीको रुपमा स्विकार्न पाउँदा आँफुहरुको छाती पनि चौडा भएको बताए । त्यस्तै श्वेताका जेठाजु दिपेन सिंह रावतले श्वेतालाई बुहारीको रुपमा स्विकार्न पाउँदा निकै खुशी लागेको बताए ।
श्वेताकी सासुले सुजातालाई हुनेवाला जेठी बुहारी भनेर परिचय गराइन् । सुजाताले औपचारिक रुपमा विबाह नगरेको भएतापनि परिवारले भने स्विकारिसकेको छ ।
पृथ्वीनारायणको शालिक नपुग्दै प्रहरी धरपकड भएपछि मनिषा कोइरालाको आक्रोश
बिजुलीको महसुल नगरपालिकाले तिरिदिने भएको छ,पूरा पढ्नुहोस्
October 18, 2020 October 18, 2020 News Nepal
अब धेरै समय बाँकी छैन मेरो छोरीलाई गुमाउन चाहन्न ,यो पोस्ट पढेर शेयर गरे बापत एक रुपैयाँ सहयोग सियोनीलाई जानेछ।
January 22, 2021 January 22, 2021 News Nepal
नाक लामो भएर न’राम्री भएँ भन्दै नाक राम्रो ब’नाउन अस्पताल गइन्, दुबै खुट्टा गु’माएर आइन्,हेर्नुहोस् कारण
January 1, 2021 January 1, 2021 News Nepal